मल्लकालीन मौलिकतामा रानीपोखरी
सम्पदा वसन्त महर्जन
सम्पदाप्रेमी स्थानीय, अभियन्ता र विज्ञहरूको अथक् प्रयत्नले आज रानीपोखरीले मल्लकालीन मौलिकतामा फर्कने अवसर पाएको छ ।
सातौँ शताब्दीको प्रविधिबाटै काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण हुँदै
विश्वसम्पदा सूचिमा सूचिकृत हनुमानढोका परिसरमा रहेको काष्ठमण्डपको शनिबार धलिं (मुख्य दलिन) पूजा सम्पन्न भएको छ। सातौँ शताब्दीको काष्ठमण्डपलाई पुरानै प्रविधिबाट पुनःनिर्माण गरिँदैछ।
ठोरीका बासिन्दा भन्छन्- 'राम जन्मभूमि अयोध्या यहीं छ!'(भिडिआ‍े रिपाेर्टसहित) भगवानहरूको सभा गर्ने डाँडा ‘भगवाननगर डाँडा’ र बाँदरहरू नुहाउने खोला ‘ढेंडेखोला’, बाँदर झुल्ने ठाउँ ‘बाँदरझुला’ पनि रहेका छन् । गुफा नजिकै रहेको पहाडको चट्टानमा सीताले शिवलिङ्गको आकृति खोपेर रामको तपस्या गरेको जुन आकृति अहिले पनि सुरक्षित भएको स्थानीय बताउँछन् ।
आधा बजेटमै न्यातपोल मन्दिरको जीर्णोद्धार सम्पन्न, ४१ सय बढी नगरवासीले गरे श्रमदान
अब नागरिकको रानीपोखरी दशकौं सेनाको कब्जामा रहेको भक्तपुरको रानीपोखरी स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा आएसँगै जीर्णोद्धार र संरक्षण कार्य धमाधम हुन थालेको छ।
‘भगवान भरोसा’ मा हाम्रा ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय सबै कुरा एकै थलोमा आफूअनुकूल अवलोकन गर्न पुग्नुपर्ने गन्तव्य नै सङ्ग्रहालय हो।
सर्वाेच्चकाे ताकेतामा राष्ट्रिय अभिलेखालय भारतबाट हराइसकेका र अन्यत्र पनि अपूर्ण अवस्थामा रहेका कतिपय ग्रन्थहरूको पूर्णताका लागि नेपालको अभिलेखालयका सामग्री उपयोगी भएका छन्।
प्रचारको लोभमा भ्रामक किंवदन्ती लुम्बिनी क्षेत्रमा प्राचीन अवशेषहरू पाइनु नौलो विषय होइन तर, सबै अवशेषबारे किंवदन्ती रचेर गौतम बुद्ध र बौद्ध धर्मसँग जोड्नु ठाउँ प्रचारको लोभ मात्र हो।
काठमाडौंमा ‘गुफा पर्यटन’ जात्रा, पर्व, मन्दिर र तिनको ऐतिहासिकतासँगै काठमाडौं उपत्यकामा पर्यटक रिझाउन यहाँका प्राचीन गुफा नयाँ आकर्षण बन्न सक्छन्।
सिला बन्दै शिलालेख सम्पदाको ऐतिहासिक र पुरातात्विक प्रमाण शिलालेख संरक्षणमा पर्याप्त चासो र चिन्ता नगरिंदा भएका अमूल्य शिलालेखहरु पनि हराउने/नष्ट हुने अवस्थामा छन्।
सम्पदा संरक्षणमा हराएको चेत विश्व सम्पदा सूचीमा परेका संसारभरका सम्पदा वरिपरि ‘गर्न नहुने’ कार्यहरूको मापदण्ड तोकिएको हुन्छ तर हामीकहाँ भने त्यसलाई बेवास्ता गरिन्छ।
युनेस्कोद्वारा प्रस्तावित पनौतीलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्ने काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको समेत नगरपालिकाले जनाएको छ ।
जोगाऔं स्वाद सम्पदा
‘पर्यटन प्रवर्द्धन र पहिचानका लागि’ भ्यूटावर र मूर्ति निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेका स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पनि बुझ्नु जरूरी छ, हाम्रा गाउँठाउँ घुम्न आउने पर्यटकलाई अनावश्यक संरचनाले भन्दा हाम्रा सांस्कृतिक र परम्परागत परिकारले बढी आकर्षित गर्नेछन्।
गुठी जग्गा होइन, सम्पदा होः संस्कृतिविद् डा. गोविन्द टण्डन
मैले २०५२ सालमै प्रकाशित नेपालमा गुठीव्यवस्था भन्ने पुस्तकमा गुठीमाथिको अतिक्रमणको सम्भावनाबारे लेखेको थिएँ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वयम्भू र हनुमानढोका दरबार क्षेत्रलाई जोड्न गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
सम्पदा क्षेत्रमा घातक कंक्रिट मोह
ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा सिमेन्टको प्रयोग गर्न नहुने मापदण्ड विपरीत कंक्रिट मोह देखिनु घातक छ।
बालखैमा भक्तपुरको पुरातत्वको प्रेममा परेकी सौभाग्य प्रधानाङ्ग (४७) को जिम्मामा यतिखेर मुलुककै सम्पदा जोगाउने जिम्मेवारी छ ।
भाइदेगःपुनर्निर्माण–भगीरथ भैयालाई ‘पुनर्जीवन’ चौतारा भगीरथ भैयाको कृतिलाई नागरिक स्तरबाटै जीवन्त बनाएर उनलाई श्रद्धाञ्जली दिने काममा जुटेको छ, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण समूह, पाटन।
१२ वैशाख २०७२ को भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण हुनसकेको छैन। भूकम्पले जग र जोर्नी खलबल्याएपछि तत्काल थामथुम पार्न टेकोले अड्याइएका सम्पदाहरू अहिले पनि सोही अवस्थामा छन्। टेकोको सहारामा धराप अवस्थामा उभिएका सम्पदाहरू काठमाडौं उपत्यकाका ठाउँठाउँमा देखिन्छन्।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ७५३ मध्ये २०५ सम्पदाको मात्र पुनर्निर्माण
१२ वैशाख २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त देशभरका ७५३ पुरातात्विक स्थल र सम्पदामध्ये हालसम्म २०५ को मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ।
राराः सौन्दर्य र जैविक सम्पदाको खानी (फोटो एसे)
चारैतिर घना जंगल, बीचमा नीलो ताल । नेपालकै ठूलो ताल राराले छिनछिनमा रुप फेर्ने चिनारी बोकेको छ । तर, यो ताल क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्यसँगै जैविक सम्पदाले पनि सुसज्जित छ ।
ऐतिहासिक–पुरातात्विक सम्पदालाई रंगीचंगी बनाउने झिल्के सोचले इतिहास अध्ययनमा बाधा पारिरहेको छ ।
सम्पदाको जोखिम र दायित्वबोध
भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका मूर्त सम्पदाको मौलिक स्वरुप र शैलीलाई ध्यानमा राखी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ।
भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका सम्पदालाई वर्गीकरण र प्राथमिकता निर्धारण गरी अगाडि बढेको भए पुनर्निर्माणले निश्चित दिशा लिन्थ्यो ।
पुनर्निर्माण शुरु भएन हनुमानढोका दरबार क्षेत्रका अधिकांश सम्पदाको
भूकम्प गएको तीन वर्ष पुरा भइसक्दा पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमानढोका दरबार क्षेत्रका अधिकांश सम्पदाको पुनर्निर्माण शुरु भएको छैन ।
भूकम्पमा भत्किएका सम्पदाका चित्रहरु प्रदर्शनीमा
भूकम्पमा भत्किएका सांस्कृतिक सम्पदाको चित्रहरुको प्रदर्शनी दरबारमार्गस्थित आजु आर्ट ग्यालरी, सेर्पा मलमा शुरु भएको छ ।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिकासहित पाँच गाउँपालिकामा रहेका ऐतिहासिक सम्पदा संकटमा परेका छन् ।
पहिले कुलीन खसहरूको शव गाड्दा बनाएको वास्तु नै अहिलेका देवलहरू हुन् भन्न सकिन्छ। त्यसकारण यो पूजास्थल नभई चिहान हो। शव गाड्ने चलन हराएसँगै देवलहरू उपेक्षित र रहस्यमय हुन थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
केही वर्षअघि दैलेखको भूर्ती पुगेकी अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष नविना लामाले देवलमा चढेर खिचेका फोटाहरू 'फेसबूक' मा पोष्ट गरेकी थिइन्। ती फोटालाई सयौंले लाइक गरे भने कतिले कुन ठाउँको हो भनेर सोधेको देखियो, त्यो उछलकुदको उपयुक्ततामाथि भने कसैले टिप्पणी गरेनन्। तर उनी जत्तिको नेतृबाट समाजले कहिल्यै त्यस्तो 'सेन्सलेस एक्ट' को अपेक्षा राखेको हुँदैन।